Nkesa kachasị mma nke Argentine Linux | Site na Linux
Ihe kacha mma Linux Argentine
Ihe ka n’ọnụ ọgụgụ n’ime anyị nwere ike mara ole na ole n’ime distros ndị kacha ewu ewu: Ubuntu, Fedora, Mint, Arch, na ndị ọzọ. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ohere; distros nwere obere akuko ma ha adighi ala. N'oge a, m na-ewetara gị kacha mma "Argentine distros". 🙂
UTUTO bụ nkesa nke GNU sistemụ arụmọrụ, nke na-eji kernel Linux-libre. Aha a na-ezo aka na ụdị ụdị ngwere (Homonota borelli, Gekkonidae) site na mgbago ugwu Argentina. Ututo bu nkesa izizi nke GNU Project choputara ka o nwere onwe ya.
N’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Ọktoba, afọ 27, ọrụ UTUTO dị kwupụtara nke Mmasị Mba site n'aka Chamberlọ Nsọ Kwesịrị Ekwesị nke Mba Argentine.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.ututo.org/
Tuquito (Luminescent afo ahụhụ, nke a maara nke ọma dị ka Luciérnaga - Lampyridae -) bụ nkesa GNU / Linux sitere na obodo Tucumán, nke Ignacio Díaz, Chris Arenas, na Mauro Torres mebere, nke ikpeazụ, onye okike nke Garfio, ngwa ọrụ maka ịmepụta site na LiveCD nkesa dị ka Tuquito. Onye mepụtara ya kachasị ọhụrụ bụ Mauro Torres na Mario Colque, bụcha ndị mmepe nke ụdị ọhụrụ Garfio.
Ụfọdụ ngwa nke ndi otu Tuquito meputara:
APTITO: nbudata ihe omuma maka APT.
Control Center: A nnọọ kensinammuo akara center.
Tuquito RSS: Notifier nke ihe omume na ukara saịtị nke Tuquito (RSS na-agụ).
Nko: Generator nke nkwado ndabere na nkesa ahaziri iche.
TuquitUP: Tuquito Version njikwa. Enye ohere online update.
Njikwa Nne na Nna: Blocker Site.
Njikwa ihe omume: Ngwa iji wụnye ma wepu software.
Tuquito WIA: Ngwa nke na-egosi ebe ngwa ndị arụnyere ọhụrụ dị.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.tuquito.org.ar/
Musix GNU + Linux bụ nkesa Linux gosipụtara na LiveCD Live-DVD na Live-USB dabere na Knoppix, Kanotix na Debian. Maka nke a na iwepu sọftụwia nwere nke dị na nkesa nne ha a na-ewere ya dị ka sistemụ arụmọrụ n'efu 100%. Ebumnuche ya karịsịa maka ndị na-egwu egwu, ndị na-ese ihe n'ozuzu ha, ma kwadebe ya maka nkuzi nka na klaasị. Ọ bụ otu n'ime (na ole na ole) nkesa Linux a ghọtara dị ka 100% n'efu site na Free Software Foundation.
Onye mbido oru a na onye isi ngalaba a n’otu n’otu ya na onye Brazil bu Gilberto Gorges n’oge a bu Argentine Marcos Germán Guglielmetti, ya na otu ndi oru iri na abuo dika Spanish Daniel Vidal Chornet ma obu José Antonio González García. Musix GNU + Linux bụkwa nsonaazụ nke ọrụ mmekọrịta nke otu obodo nke ndị ọrụ na ndị mmemme, na-amalite na Argentina mana ijikwa ijikọta otu mba dị iche iche nke ndị Brazil, Spanish, Uruguay, America, Mexico, Costa Ricans, wdg.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.musix.org.ar/
Lihuen GNU / Linux bụ nkesa Linux mbụ dabere na GnuLinEx ma mepụtara ya site na Ngalaba Informatics nke Mahadum Mba nke La Plata, Argentina. Na mgbakwunye na CD echichi ọkọlọtọ maka nkesa, enwere ụdị CD Live. Lihuen lebara anya na agụmakwụkwọ ma na-agba ọsọ na kọmputa kọmputa OLPC. Dị ka mbipute 2.x Lihuen dabeere na Debian GNU / Linux.
Nnọọ weebụsaịtị: http://lihuen.info.unlp.edu.ar/
Dragora bụ nkesa GNU / Linux lekwasịrị anya na nnwere onwe, asụsụ (Spanish), nkwụsi ike na nchekwa. O nwere ihe di nkpa nke etolite na Argentina na-adighi dabere na nkesa mbu ozo, ya na ihe omuma ndi yiri Slackware. Dragora bu otu n'ime nkesa ndị Free Software Foundation kwadoro, ebe ọ bụ ọ bụ 100% free software. A chịkọtara ya maka ụlọ ọrụ i686, nke na-enye ya nnukwu mmegharị n'etiti ndị na-arụ ọrụ, si otú a na-ahụ na arụmọrụ ziri ezi na ụlọ dị iche iche.
Nkà ihe ọmụma Dragora
KISS nkà ihe ọmụma: Kkpụrụ KISS bụ aha nnabata nke dabara na ahịrịokwu bekee: "Mee ka Ọ Dị mkpụmkpụ ma dịkwa Nfe". Ọ bụ nkà ihe omuma Unix omenala iji mee ka ihe dị mfe.
YAGNI nkà ihe ọmụma: YAGNI bụ okwu mmeghe dabara na nkebi okwu a n'asụsụ Bekee: "A gaghị achọ ya". Ọ bụ nkà ihe ọmụma ngwanrọ nke mejupụtara B NOTGH adding ịgbakwunye ọrụ ọ gwụla ma ọ dị mkpa.
Akọrọ nkà ihe ọmụma: DRY bu okwu nkpuru okwu nke dabara na okwu a dika Bekee: “Emeghachila onwe gi” (Emela Onwe Gi). Ọ bụ nkà ihe ọmụma na-emepe emepe nke na-akwalite na e mepụtaghị ihe ọmụma ahụ. Eleghị anya echiche kachasị ihe eji arụ ọrụ ahụ, mana nke a na-echebara echiche.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.dragora.org/wiki/
Ọrụ okporo ụzọ 9.04 bụ usoro Linux arụ ọrụ n'efu, ngwa ngwa ma dịkwa mfe iji. Otu n'ime nsụgharị ya, "Vieron" emepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji mee ka ọrụ nke ịkwaga sistemụ arụmọrụ dị mfe maka ndị ọrụ Windows chọrọ ma ọ bụ chọọ ịgbanwe na Linux, na-enyekwa eserese eserese yiri Vista.
Ọ dabeere na nkesa Ubuntu na Debian n'efu, si otú a jikọta ike na nkwụsi ike nke Linux na-esote eserese eserese na-adọrọ mmasị ma na-enweghị nghọta.
URLI 9.04 na-enye ụdị ọhụụ dị mma nke emebere maka ụdị ndị ọrụ niile, nhazi nke mmemme karịa, mmemme agile na n'ikpeazụ nkwado zuru oke maka mmetụta 3D na Beryl-Compiz.
Njikọ ndị ọzọ nke ndị ọkwọ ụgbọala Win-Modem, kernel ọhụrụ, ụdị ALSA ọhụrụ, KDE ọhụrụ, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu, nkwado maka njikwa dịpụrụ adịpụ. Sulọ ọrụ Office dakọtara na akwụkwọ Microsoft Office, melite njikwa ngwungwu, enweghị virus, ihe nchọgharị weebụ, CD / DVD burner na ihe ọkpụkpọ multimedia.
A na-ekesa Urli 9.04 na LiveCD, nke na-enye gị ohere ịnwale ya na-enweghị ịwụnye ya ma ọ bụ gbanwee faịlụ ọ bụla na PC gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye ya ma emechaa, ị ga-pịa ụzọ mkpirisi desktọọpụ Urli iji malite ihe nrụnye eserese.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.urli.com.ar/es/index.html
Nbudata Ọ bụ nkesa Linux nke sitere na Argentine, ewepụtara ma ọ bụ "gbanwere" site na Ubuntu, na-ekerịta ngwungwu ngwanrọ na faịlụ na nke ikpeazụ, mepụtara ma gbadoro ụkwụ iji mee ihe na kọfị ịntanetị, nchịkwa ọha, ụlọ ọrụ, wdg.
Ciberlinux na-eji (site na mbipute 1.3 "penguins") Gnome dị ka okirikiri desktọọpụ, yana a gbanwetụrụ Windows-ịke isiokwu na dị ka a workstation akara mmemme freeware usoro ihe omume, cbm.
Maka ụdị «Pinguinos» (1.3) (2010) ọ nwere DVD (3.8 gb), enwere ike iji ya dị ka Live DVD. eji remastersys iji mepụta ma nchekwa usoro yana DVD-DVD.
Nnọọ weebụsaịtị: http://tecnicoslinux.com.ar/ciberlinux
Sirius OS bụ ọrụ ngo na-achọ ike ezigbo ụlọ ọrụ Gnu / Linux na-arụ ọrụ. Ọ dabere na sistemụ micronucleus (na-ahụ maka ịkwado ọrụ ndị bụ isi nke kernel) na ya bụ ihe nrụpụta nke kernel monolithic, nke a na-ewereghị dị ka nke a n'ihi ogbugbu ya na ọnọdụ "nkesa", na-asọpụrụ ụkpụrụ POSIX mgbe niile. .
Sirius OS bụ ọrụ na-emeghe ma na-akwụghị ụgwọ, nke obodo na-echekwa ma na-emelite, n'ihi mbọ na oge nke ọtụtụ ndị ọrụ. Onye ọ bụla nwere ike ịmekọrịta, ma ọ bụ na akụkụ mmepe, imewe, ma ọ bụ naanị ijikọ na echiche ma ọ bụ echiche.
Ọ bụ nkesa na-adabere na GNOME, na mgbanwe nke ya na kernel na nke ga-adị maka nbudata n'oge na-adịghị anya; dị mwute ikwu na n'ihi usu nsogbu, anyị enweghị ike ibudata ya ma; mana ọ ga-adị ka o kwesịrị.
Nnọọ weebụsaịtị: http://sirius-os.com/index.html
Pixart SRL bụ ụlọ ọrụ raara nye mmepe nke Software, ọkachasị azịza dabere na sistemụ arụmọrụ Linux, dị ka: Rxart Desktop, Rxart Server, Rxart Family Pack, Rxart Abogados.
Llọ ọrụ Corel na 1998 hapụrụ mpaghara azụmahịa Latin America n'aka Pixart maka mmepe mpaghara ya. Corel kpebiri ịkwụsị ngwaahịa ya, Pixart weghaara ohere nke ịga n'ihu na ọrụ ahụ na-enweta nkwado site na Corel na teknụzụ yana n'ụzọ iwu. N'otu oge ahụ, Corel na-enyefe Sistemụ arụmọrụ na Xandros Inc. maka nsụgharị Bekee na Pixart na-enweta nkwekọrịta maka mmepe na Spanish na Portuguese. Pixart bịanyere aka na nkwekọrịta nkwado na mmepe iji mepụta ngwaahịa ahụ n'asụsụ Spanish na-eji etu esi amata na ihe ọmụma nke ahịa Latin America.
Rxart Desktọpụ 3.2 bụ Linux desktop desktọọpụ zuru ezu nke gụnyekwara ngwa niile ịchọrọ ịrụ ọrụ, kpọọ ma ọ bụ kpọtụrụ.
Ewubere na ụlọ ọrụ Linux nwere ntụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi, ọ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ndụ ndụ dijitalụ nke gị, otu ịchọrọ ya, na-enweghị nje virus, spyware, na egwu egwu ndị ọzọ.
Nnọọ weebụsaịtị: http://www.pixartargentina.com.ar/espanol/index2.html
Rịba ama: a na-akwụ ụgwọ distros niile Pixart Argentina mepụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe kacha mma Linux Argentine
Ihere abughi imata akuko banyere oru na mba gi: odighi onye nwere onwe ya ma oburu na ha adighi njikere inyere ndi ozo aka. Anyi niile nwere ohere ikwuputa ihe anyi kwuru, na nkwanye ugwu. Ọ bụ ya mere m ji enwe ahụ iru ala ịga na blọọgụ a, ma na-atụ aro ER, dịka ọ bụ distro dị mma; ọbụnadị nke ọma site na Distrowatch. Ọ bụ naanị ihe m ga-ekwu n'okwu a. Ezi ekele niile.
Batman. Ndị aka ekpe a dị ịtụnanya, ezigbo, Chango, enwere ọtụtụ ndị Argentine na-anaghị agbaso nrọ gị nke ọchịchị narco-villera ọchịchị aka ike, kedu ihe ị ga-eme, ọkọlọtọ nke Argentina bụ acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha, ọ bụghị akwa uhie. Ewezuga nke a, achọrọ m ịma maka nsogbu a na-eyi ọha egwu, anyị ga-ekweta na ha bụ nke mbụ, onye ga-eche maka ya?
Zaghachi na Anonimous
Anonimous, dika Carlos26, ha amaghi ihe ha na ekwu, obu nkesa ma dika Chango si di, o na aru oru nke oma, maka ndi komuniz narco villera, eziokwu na-ewute m, na ezin'ulo gi dara ogbenye ma oburu na ha eche na ha bu ndi n’agụghị akwụkwọ n’amaghị otu esi amata ọdịiche dị n’otu na ihe nke ọzọ ma na etinye anya n’ihe na-eme na CNN. Cheers
Ndo, ma ọ bụrụ na ịmaghị akụkọ ihe mere eme, ekwula okwu, ike gwụrụ m nke ndị na-anaghị emepe akwụkwọ ma malite ịza ajụjụ n'okwu na-enweghị obere echiche. Ma ọ bụrụ na ihere ịbụ onye Argentine, ị nwere ike ịga ebe ị maralarị, yana United States iji kpagbuo gị ma chọpụta na ị bi n'igwe ojii nke fart. Ọ bụ nkesa naanị, ọ bụrụ na ịchọghị akwụkwọ ahụaja na akara ngosi ị nwere ike ịgbanwe ya, ọ bụrụ na ị maghị.
Ọ bụrụ na ịnwaleghị ya, ekwula okwu ma gaa biri na USA ma ọ bụrụ na ị masịghị ya ... facho ...
Amaghị m onye ọ bụla n'ime ha, yabụ enwere m ike ịnwale ụfọdụ.
Ezigbo ọrụ na blog gị!
Zaghachi na Kirtash 1197
Kedu ihe kpatara Red Star na-anọghị na nso a?
A na m atụ uche gị Tango GNU / Linux: http://www.tangolinux.com.ar/
Ana m etinye Tango GNU / Linux: http://www.tangolinux.com.ar/
Leave hapuru kwort bu kwa onye Argentine.
Akwa Eärendil, post a ga-amata ọrụ nke Argentine distros nke na-enweghị ihe ọ bụla nwere anyaụfụ na ọrụ ndị ọzọ n'ụwa. N'aka nke ọzọ, achọrọ m ịkọwa distro ọzọ, ọ bụghị Argentine, mana ọ na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe maka ndị chọrọ iji Slackware ma site na akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu siri ike. A na-akpọ ya Salix OS, "usoro bonsai", ọ na-agbadakwa na desktọọpụ (ọkụ dị nro maka nsụgharị Xfce na LXDE), maka ndị ọkachamara na ojiji ụlọ (mana ọ na-arụkwa ọrụ zuru oke na laptọọpụ).
Olile anya na ichota ya na ihe nmuta ka itinye na slackware nke eweputara na Distros. Banyere.
Oops, echefuru m ịgwa gị na a sụgharịrị Salix OS n'asụsụ Spanish nke ọma, ma na-akwado ọtụtụ mba na-asụ Spanish, ekele.
Daalụ nke ukwuu Chango maka ịkekọrịta ozi a! Aga m ewere ya na akaụntụ maka ọkwa dị n'ihu.
Achọrọ m ịgbakwunye Huayra, ọ dị ka ọ bụ ọrụ ọhụụ na ọ bụ ya mere na ọ nọghị ebe a, mana ọ dịkwa Argentine.
Daalụ maka ntinye !!
Zaghachi Gabriel de Leon
Maka ndị nwere mmasị na Huayra, ana m akwado ịgụ nyocha anyị na distro a: http://usemoslinux.blogspot.com/2012/12/probamos-huayra-linux-la-distro-del.html
Ọ bụ ihe na-eme ka extremism na-arịa ọrịa, kedu ihe ọkụ mmụọ na-ese foto nke Che Guevara na-eme, ogbu ọchụ nke a na-ahụ nke ọma na Argentina na Cuba na mmadụ ole na ole kpọgidere "rockers" bụ ndị na-aghọtaghị ihe jọgburu onwe ya banyere ihe ọchịchị ndị ọchịchị Kọmunist bụ ma ka di. Ọ bụ kpam kpam mkpari. Ana m akwado nnwere onwe ikwupụta onwe gị mana ụdị ihe a na-eme m ihere nke ukwuu ịbụ onye Argentina.
Ndewo Eärendil, echefula Red Star GNU / Linux, nke Debian lenny zuru oke na ngwa ngwa nke gbadoro:
Tuquito dị oke njọ bụ aha Mauro Torres, otu n'ime ndị nwere phishing saịtị na sava ya ebe Tuquito na-anabata ndị ọbịa. Ihe ihere
Ozi ndi ozo: http://murder.diosdelared.com/?coment=3837
mama 21 mama dijo
Na-efu efu nwa nkịta-es OS
Ana m ahụ otu okwu, ọ bụ ezie na anaghị m a paya ntị, taa, m ga-ekwu uche m. Anyị ndị Argentines kwenyere na anyị kachasị mma n'ihe niile, anyị bi n'igwe ojii nke nkwenkwe ụgha, nke anaghị agbasa ruo mgbe anyị hapụrụ mba ahụ. Anaghị m ekwu maka ịhapụ Argentina, ana m ekwu maka ịhapụ mpaghara America. Australia, New Zealand, Eshia. Kwere m, anyị abụghị ndị kachasị mma, enwere ndị nwere ọgụgụ isi karịa anyị, mana ha agaghị ahụ ya ruo mgbe ha hapụrụ kọntinent ahụ. Ọ bụkwa eziokwu na anyị mepụtara ezigbo ihe nke ọma nke ọma n’ọtụtụ ebe. Mana anyị ga-aga n'ihu na nzuzu nke ncheta, na-ebi n'oge gara aga ma na-akọcha ndị agha maka ọchịchị aka ike, ndị aka ekpe maka mwakpo ahụ. Ọ bụrụhaala na ha anọgide na-ezu ohi, na "ndị nọ n'èzí ga-eri anyị." Aghọtara ya?
Site n'ụzọ, Debian, onye na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na e nwere ndị na-agaghị "agụ" akwụkwọ, "savías" edere ya na B maka ịnyịnya ibu, ọtụtụ akwụkwọ nwere ike mepee, mana n'etiti ha ka ha "hụ" ọkọwa okwu.
Olee otú jọrọ njọ Cyberlinux xD
O siri ike ibudata ihe oyiyi iso n'ihi na ọ na-esi na 32 bits m na-eche, dị ka n'okpuru 64 m Windows 7 bụ 64 ibe n'ibe na ọ were fọrọ nke nta ka izu abụọ nwere ma ọ bụrụ na m na-enwe ike iwunye Linux, ihe ndị kasị sie ike bụ jodia iso image na otu esi emeghe ya na winrar ma detuo ya na DVD ma ọ bụ flas na-ekele onye ọ bụla gụrụ m ma zaa m, m bụ karịa ọhụrụ, ọhụrụ na Linux
Huayra 2.0 bu uzo ohuru nke n’enye otutu ndi oru ohuru ihe.
Ndị enyi ebe a ewetara m gị kpakpando uhie, ekele maka onyinye nke mamalibre
Budata ya na ibe gị: http://estrellaroja.mamalibre.com.ar/
M na-eji Windows 7. Ugbu a, m kwesịrị formatted ma m akwụkwọ enweghị mbụ software na m arụnyere na otu na-abụghị na m na-adịghị amasị otú o si arụ ọrụ. Otu n’ime ụmụ m nwoke nyere m ndụmọdụ na Linux. Aghọtachaghị m ihe a na-ekwu, m ga-achọkwa ndụmọdụ nke kacha m mma. Igwe ahụ bụ maka iji onwe gị n'ụlọ. Achọrọ m otu ụlọ ọrụ Office ebe m na-eji ụfọdụ mmemme dịka Okwu, Excel, Power Point.
Ndị ọzọ maka micro $ soft office bụ libreoffice (ị nwere ike ịnwale ya na sistemụ ọ bụla, gụnyere guindou $) na openoffice n'etiti ndị pụtara ìhè, mana enwere karịa; ha abụọ nwere ikike ike. Foxit pdf na-agụ ga-abụ ihe ọzọ (ma maka m ọ ka mma ma m jiri ya) maka pdf. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ụdị iji ya na sọọfụ ịntanetị na obere ihe ndị ọzọ, ị nwere nkesa na-enweghị ngwụcha dị maka ịmalite. Ana m anwale trisquel 7.0 distro nke nwere ọnọdụ livecd (ịnwere ike iji ya site na ịmalite ya na pc buut na-enweghị wụnye ihe ọ bụla na dvd na onyonyo dị n'ime ma ọ bụ eriri), ọ bụrụ na ị were kaadị vidiyo na wifi abanyekwaghị gị nwere hazi ihe ọ bụla na ọ na-ama na-abịa na libreoffice arụnyere, ihe ndị ọzọ (ihe nchọgharị weebụ, ọkpụkpọ vidiyo, gnash, wdg). Jisie na m nwere olile anya na ozi a ga-enyere gị aka.
Ọzọ m dere na-ekwu na m akwụkwọ bụ 32 b. Ikekwe ọ dị mkpa.
Ehihie oma ndi mmadu !!! M na ede ihe nihi na achoro m ibido iji Linux na komputa desktọpụ m ma amaghi nke m nwere ike ibido. Kedu otu m ga esi enweta ya, aga m enwe ekele maka enyemaka ọ bụla, ana m ekele gị nke ukwuu.
Akwụkwọ a na-atọ m ụtọ nke ukwuu, ọ dị mma ịmara ntakịrị karịa, daalụ.
Amm .. ma ọ bụrụ na otu ihe, m chere na ị chọrọ Huayra GNU / Linux 100% Argentine na ezigbo nkesa. ekene m unu niile
Zaghachi nke anụ ọhịa wolf
Daalụ wolf! Nke a na post wee tupu Huayra, na ihe mere na anyị etinyeghị ya… na agbanyeghị, anyị bipụtara ụfọdụ posts banyere distro.
Ọ bụ oke nkesa Linux nke ndị amụrụ na Tucuman dị ka m mere. daalụ na nke a bụ otu ekpomeekpo linux nke m na-ejikwa. dị ukwuu na ihe niile ... ọrụ
ọ bụrụ na ha na-eji tuquito, ọ kachasị mma n'ihi na ọ nwere ekpomeekpo nke tucuman na ngwa agha na Argentina mana, ha nwere ike iji distros ọ bụla, n'ihi na ha niile dị mma ma nweere onwe ha na ekele niile linus na stallman !!
Akwụkwọ ahụaja ọhụụ maka Ubuntu 10.10
Esi tinye Epson T23 ngwa nbipute